अभिनेत्री दत्तको खुलासा : ‘वैवाहिक क रणी’को सीनपछि म भित्रैबाट टुटेकी थिएँ, घरमा गएर धेरै रोएँ – Khabar Silo
अभिनेत्री दत्तको खुलासा : ‘वैवाहिक क रणी’को सीनपछि म भित्रैबाट टुटेकी थिएँ, घरमा गएर धेरै रोएँ
एजेन्सी, ७ माघ । बलिउड अभिनेत्री दिब्या दत्ताले लामो समयपछि एक गम्भीर कुराको खुलासा गरेकी छन् । दत्ताले एक फिल्ममा ‘वैवाहिक क रणी’ को सीन दिएपछि घरमा गएर रोएको बताएकी छिन् ।
कुशल अभिनयका कारण राष्ट्रिय पुरस्कारसमेत प्राप्त गरेकी दत्तले एक कार्यक्रममा कुराकानीको क्रममा उक्त क रणीको सीनपछि आफू भित्रैबाट टुटेको बताएकी थिइन् ।
दत्तले ‘जश्न ए रेख्ता’ को दौरान आफ्नो व्यवसायिक जीवन र शुटिङ अनुभवको बारेमा आफ्ना कुराहरु शेयर गरेकी थिइन् । उनले भनिन्, ‘केही सयम पहिले म एउटा फिल्म शुटिङ गरिरहेको थिएँ । जसमा एउटा सीन वैवाहिक क र णीको सम्बन्धमा थियो । यस्तो सीन सुट गर्दा निर्देशक, फिल्मका अन्य क्रु मेम्बरहरु सं’वेद’नशील हुन्छन् । र सबै त्यस्तो सीनलाई राम्रो बनाउन सचेत हुन्छन् । सबै कुरालाई ध्यानमा राखिन्छ ।’
दिब्याले अगाडि भनिन्, ‘उक्त सीन गरेपछि म भित्रैबाट टु टेकी थिएँ । र, घर गएर धेरै रोएँ । त्यो समय मलाई क रणीको उक्त सीनले निकै प्रभावित पारेको थियो ।’
तिहार गीत ‘ह्याप्पी तिहार, चिसो वियर’का कारण गायक दुर्गेश थापा समस्यामा, प्रहरीले बोलायो
काठमाडौं। यसवर्षको तीजमा ‘बिच्च बिच्चमा’बोलको गीतका कारण चर्चामा आएका गायक तथा मोडल दुर्गेश थापा तिहार गीतका कारण आलोचित बनेका छन्। केही दिनअघि सार्वजनिक तिहार गीत ‘ह्याप्पी तिहार, चिसो वियर’का कारण दुर्गेश आलोचित बनेका हुन्। गीतले छोटो समयमा लोकप्रियता कमाएपनि यसका केही शब्दहरुलाई लिएर युट्युबमा चर्को आलोचना भएको छ। त्यस्ता नकारात्मक कमेन्ट आएपछि अहिले युट्युबको कमेन्टहरु […]
विवाह हुने भएपछि अन्जु र थिर कोइरालाले दिए यस्तो प्रतिकृया
Posted on February 4, 2021 Author khabar silo
काठमाडौं । चर्चित गायिका अञ्जु पन्त दोस्रो वैवाहिक वन्धनमा बाँधिने भएकी छिन् । गायिका अञ्जुले गीतकार थिर कोइरालासँग विवाह गर्ने भएकी हुन् । अञ्जुको एक छोरी छिन्–परितोषिका पन्त । उनी पनि मोडलिङ क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी छिन् । छोरीकै विशेष आग्रहमा गायिका पन्तले दोस्रो बिहे गर्ने लागेको जनाइएको छ । इलाम घर भएका कोइराला दुई दशकदेखि […]
शृंखला खतिवडाको महिनावारी अनुभव:हेर्नुहोस भिडियो सहित
केही साताअघि पूर्व मिस नेपाल शृंखला खतिवडाले आफ्नो युट्युब च्यानलमा एउटा भिडिओ सार्वजनिक गरिन्। ‘छाउपडीको अनुभव’ नामक उक्त भिडिओमा उनले अछाममा रहेको छाउप्रथाको अवस्था प्रस्तुत गरेकी थिइन्। त्यहाँका महिलाले महिनावारी बेला भोग्नुपर्ने समस्या चित्रण गर्दै शृंखला स्वयं छाउभित्र बसेको देखिन्छ भिडिओमा। उक्त भिडिओ सार्वजनिक भएलगत्तै शृंखलाले आफ्ना प्रशंसकहरूबाट व्यापक प्रशंसा पाइन्। छ मिनेट लामो भिडिओमा […]
धुलिखेल-बर्दिवास सडकमा अब ‘पासिङ जोन’
ग्यालेक्सी नोट १० लाइट लञ्च भएसँगै प्रि-बुकिङ खुला, यस्ता छन् फिचर्स
‘नेपालको दु:ख देख्न सकेनौँ, फटाफट काम गरेर सिलिन्डर पठाउन सफल भयौँ’
तुलसीले दिन्छ संकट आउन लागेको पूर्वसंकेत, यसरी थाहा पाउनुहोस्
फेरी डब्लुएचओले दियो दुनियालाई त्रसित गराउने खबर ! के फेरी बन्द गर्नै पर्छ त ? जानकारी सेयर गरौ
महिनावरी हुँदा पेट दुख्ने समस्या बाट छुटराका पाउने यी घरेलु उपाय, पढ्नुहाेस् र सेयर गर्नुहाेस्
राति सपनामा के देखे शुभ के देखे अशुभ ?